Seho indroa miantoana : Fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy Ambondrona no nifidianana an’Antsahamanitra -
AccueilVaovao SamihafaSeho indroa miantoana : Fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy Ambondrona no nifidianana an’Antsahamanitra
Seho indroa miantoana : Fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy Ambondrona no nifidianana an’Antsahamanitra
14/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hisantatra ny fiakarana an-tsehatra. Fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy no nifidianan’ny tarika Ambondrona an’Antsahamanitra. Seho indroa miantoana hotanterahina ny 24 sy ny 25 marsa izao. « Tsy mitsahatra ny mitombo ireo mpankafy ny tarika Ambondrona , ary misy amin’izy ireo no mbola tanora taty aoriana izay mahita tsirony kokoa amin’ny seho ao Antsahamanitra », hoy Beranto raha nitondra fanazavana ny antony nifidianana an’Antsahamanitra, na dia efa nahafeno hipoka ny Coliseum aza izy ireo. « Ankoatra izay dia misy aingam-panahy hafa ihany koa ao Antsahamanitra eo amin’ny lafin’ny teknika, indrindra ny fifehezana ny feo sy ny fanamafisam-peo », hoy hatrany izy.
Tsy hitovy ny fampisehoana atao ny sabotsy sy ny alahady na dia misy ihany aza ny ampahany hitovizana. Haharitra ora telo avy ny fampisehoana, ary maro amin’ireo hiran’ny tarika be mpankafy nefa tsy natao firy teny an-tsehatra no holalaovin’izy ireo amin’ireo andro ireo. « Maro ireo hira voalazan’ny olona fa tsy nataonay taorian’ireny seho ireny no ezahina atao amin’ireo andro ireo », hoy hatrany ny tarika.
Etsy ankilan’izay, fotoana ihany koa ireo andro roa ireo hanomezan’ny tarika Ambondrona andran-tsira amin’ny endriky ny rakikira vaovao avoakan’izy ireo amin’ity taona ity. Santionany amin’izany ny « Maraina vao » efa hita sy re amin’ireo haino aman-jery samihafa eto amintsika.
Efa tapitra tamin’ny andro nivoahan’ ny tapakila famandriana ho an’ireo fampisehoana ireo, nanamarika ihany koa anefa ny tarika fa mbola misy ny tapakila tsotra mandra-pisian’ny filazana ofisialy avy amin’ny tarika fa tapitra ny tapakila.
Omaly tamin’ny 4 ora aty Madagasikara, no noraisin’ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron tao amin’ny lapam-panjakana Elysée ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nilaza ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina fa afa-po tanteraka tamin’ny ity fihaonana ity .Niompanan’ny fihaonana ...Tohiny